निकै आलोचना खेपे पिडामा रहेकी वर्षाले अहिले आएर गरिन यस्तो घोषणा ! « Etajakhabar
निकै आलोचना खेपे पिडामा रहेकी वर्षाले अहिले आएर गरिन यस्तो घोषणा !
प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:३१
काठमाडौं, । एउटा अभिब्यक्तिका कारण नायिका वर्षा राउत केही दिन सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित बनिन् । उनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नै नसकिने खालका ट्रोल बनाइए । भिडियो सामग्री बनाएर अश्लिल गाली गरियो । आफ्नो करियरमा यति धेरै आलोचना यि नायिकाले कहिल्यै भोगेकी थिइनन् । अष्ट्रेलिया जाँदा लगाएको एउटा ड्रेसका कारण ट्रोल बन्दा उनलाई खासै समस्या भएको थिएन । तर यो पटक उनले भोगेको अप्ठेरो अलि फरक खालको थियो ।
राष्ट्रियताका विषयमा नायिका वर्षा राउतले दिएको एक अभिव्यक्तिले खुबै आलोचना भोग्नु परेको थियो । चलचित्र क्षेत्रमा केही बर्ष बिताउँदै गर्दा वर्षाले यति धेरै आलोचना भोग्नु परेको यो पहिलो पटक हो । भावूक स्वभावकी अहिलेको आलोचनाले भने निकै बिचलित भइन् । उनले त्यो गल्ती सच्याउन दिएको अभिब्यक्तिलाई पनि टिप्पणी गरियो । राष्ट्रियताको वहस निकै चर्को भएको बेलामा बोलि चिप्लिदा उनले ठूलै मुल्य चुकाउनु पर्यो । उनलाई यो घटना विर्सिएर अगाडि बढ्न अझै समय लाग्नेछ ।